Sehatra Serivisy Votoatiny GRM: Mitondra ny faharanitan-tsaina amin'ny fizotry ny asa aman-draharanao | Martech Zone
Ny votoatin'ny Enterprise Content Management (ECM) dia manohy mandroso ny tolotra omeny, tsy hoe lasa repositories antontan-taratasy fotsiny, fa tena manome faharanitan-tsaina ho an'ny fizotran'ny orinasa. GRM's Content Services Platform (CSP) dia mihoatra ny rafitra fitantanana antontan-taratasy. Vahaolana ahafahana mamorona antontan-taratasy azo zaraina ary avy eo azo hatsaraina ny làlan'ny asa aman-draharaha. Ny CSP an'ny GRM dia mamela a rafitra fitantanana atiny (CMS) hampidirina angona angona, fianarana milina, fisamborana angon-drakitra manan-tsaina, ary lozisialy DMS hitantanana antontan-taratasy, fanarahana kinova, endri-piarovana avo lenta, intuitive fitantanana ny orinasa (BPM) ary Rindrambaiko fitantanana workflow (WMS).
Betsaka ny fanafohezan-teny 3 litera!
Ny endri-javatra ao amin'ny GRM's Content Services Platform dia misy:
Manaova automatique sy mandrindra ny fizotrany - Ny asa aman-draharaha isan'andro toy ny kaomandy mividy na fanodinana fitakiana dia matetika an-tanana, mora tohina sy diso, ary matetika dia miteraka olana lehibe kokoa rehefa tsy tafiditra. Miaraka amin'ny serivisy atiny GRM dia azonao atao ny manodina sy mandrindra mora foana ny fizotrany toy izany. Ny CSP anay dia manara-maso ny asan'ny mpisera rehetra sy ny fanitsiana ny antontan-taratasy rehefa miara-miasa izy ireo amin'ny fotoana tena izy, ary manatsara ny fandrosoana mankany amin'ny famitana ny asa manakiana.
Rafitra fitantanana votoatin'ny orinasa - ny sehatry ny serivisy votoatin'izy ireo dia rafitra fitantanana votoatin'ny orinasan'ny AI izay mamoaka sy manodina angona tsy voarafitra, na dia avy amin'ny rafitra lova aza, ary manatsara ny fizotry ny asa aman-draharaha. Nandalo ny sonia elektronika izahay. Izy io dia CSP natao ho fanatsarana hatrany ny fizotry ny asa aman-draharaha sy ny fidirana an-tserasera, eny fa na amin'ny finday aza.
Document Lifecyle Management - GRM dia manolotra serivisy fitantanana antontan-taratasy iray manontolo izay afaka mitondra sy manova ny fisie antontan-taratasy ho antontan-taratasy niomerika, mamoaka angona, manasokajy firaketana, ary manao azy ireo ho vonona hiara-hiasa amin'ny fizotran'ny orinasanao. Izay taloha dia niasa ora maro dia vita tao anatin'ny segondra. Na dia efa mitantana ny fizotran'ny workflow aza ianao, dia matokia fa ny rakitsoratrao rehetra dia voatazona soa aman-tsara ao amin'ny fitoeran-drakitra fitehirizan-drakitra rahona na any amin'ny toerana fitahirizan-taratasy any an-toerana, azo aleha isaky ny mila azy ireo ianao.
Miorina tsara, mifototra amin'ny rahona ny GRM sehatra serivisy atiny (CSP) dia rafitra mailaka sy azo ovaina ary misy andiana fitaovana sy fahaiza-manao manampy ny orinasa hifehy ny angon-drakitra - mandrindra sy mampiasa azy io amin'ny fomba mahomby sy mahomby. Anisan'ireo fahaiza-manao ireo ny Actionable Analytics, asa fandinihana mialoha izay manome fahitana amin'ny fotoana tena izy mba hahafantaran'ny mpampiasa avy hatrany ny olana mety hitranga sy ny fikirakirana azy ireo.
Momba ny GRM
GRM Information Management dia mpamatsy rafitra fitantanana fampahalalana. Ny sehatry ny serivisy atolotry ny atiny matanjaka an'ny GRM dia ivon'ny vahaolana nomerika omen'ny GRM ny mpanjifany. Manompo sehatra maro samihafa amin'ny indostria toy ny fitsaboana, governemanta, ara-dalàna, ara-bola ary ny loharanon'olombelona, ​​GRM dia manolotra serivisy ho an'ny mpanjifany toa ny fiovam-po dizitaly, vahaolana momba ny fisamborana angon-drakitra, rafitra fitantanana antontan-taratasy, automatisation d'exploitation, fitahirizana data, fanarahan-dalàna ary fitantanana, orinasa. fitantanana ny fizotrany sy ny fahaizany mamakafaka efa lasa lavitra, ary koa serivisy fitehirizana antontan-taratasy, fitiliana ary fitantanana firaketana an-tsoratra ara-batana.
Tags: raharaham-barotrafitehirizana antontan-taratasy rahonaCMSSehatra serivisy atinycspData analyticsrindrambaiko fitantanana angonaDMStahirin-kevitraECMFitantanana votoatin'ny orinasagrmfisamborana angon-drakitra manan-tsainafianarana milinataratasy taratasyfanarahana kinovafizotran'ny workflow